Part 1: Olee otú m setịpụrụ m mp3 dị ka a ringtone na Samsung Galaxy S?
Part 2: Olee ebe ibudata ukara Samsung ringtone?
Nkebi nke 3: Olee bee m music ka a Samsung ringtone
Nkebi nke 4: Olee ebe ibudata free music
Iji tọọ ringtone na gị Samsung Galaxy ekwentị, ị ga-mkpa a laptọọpụ na mp3 song / akụ zọpụta ya. Alternatively, ị nwere ike ibudata ọ bụla mp3 ụda gị mobile ozugbo.
Isetịpụ omenala MP3 ringtone site mwube menu
1. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe mp3 ringtone gị Samsung ekwentị dị ka ma na mkpa ka ị nyefee otu onye si gị na laptọọpụ, nyefee ya site n'ọnụ eriri USB. Ị nwere ike ịzọpụta ringtone na ọnọdụ ọ bụla nke gị nhọrọ. Ọ bụrụ na i nwere gị chọrọ mp3 ringtone ama ebudatara na ekwentị gị, usoro kwụpụ 2.
2. Gaa ọnọdụ menu nke a na-akara dị ka a gear ekara akara ngosi. Ịnyagharịa taabụ iji chọta nhọrọ kpọrọ "Sound".
3. Site menu na-emepe elu, họrọ nhọrọ akara dị ka "Ringtones".
4. A menu ga-emeghe elu na ndị niile ụdaolu na gị Samsung ngwaọrụ nwere ndabara. Gbadaa na-ahụ mp3 ringtone na ị dị nnọọ kpọfere / ebudatara gị Samsung Galaxy. Ị kasị eleghị anya ga-ịhụ ya na nke a menu, otú enweta bọtịnụ akara "Tinye".
5.-ahọrọ "Sound onye na-atụtụ" dị ka isi iyi si nke ị chọrọ ka ịgbakwunye mp3 ringtone.
6. A ndepụta niile mp3 media na ekwentị gị ga-emeghe elu gụnyere ihe nile mp3 songs na gị collection. Họrọ gị chọrọ mp3 ringtone a na ndepụta site na ịme ọpịpị ya na enweta "Emela" Ozugbo ị na-eme.
Omenala MP3 ringtone n'ihi na ụfọdụ na kọntaktị
1. Gaa ndabere gị music ngwa na-agagharị aka ịchọta ndị mp3 ụda na ị chọrọ ka dị ka gị ringtone nke a kpọmkwem kọntaktị.
2. Kpatụ menu button, aka bọtịnụ dị n'aka ekpe n'akụkụ aka nke n'ụlọ bọtịnụ. A menu ga-emeghe elu. Họrọ nhọrọ na-ekwu "Mee ka".
3. A ọhụrụ na ihuenyo ga-emeghe elu na atọ nhọrọ na ya. Họrọ onye na akara dị ka "bere ubé Ringtone" wee họrọ "mere".
4. Mgbe a na isi ịkpọtụrụ gị ndepụta ga-emeghe elu; họrọ kọntaktị na ị chọrọ ekenye nke ugbu a mp3 ụda ma ọ ga-setịpụrụ dị ka ndabere ringtone maka na kpọmkwem kọntaktị.
Isetịpụ MP3 dị ka omenala ngosi ụda
Na-esetịpụ ihe mp3 faịlụ dị ka omenala ngosi ụda bụ a bit dị iche iche karịa mwube ya dị ka omenala ringtone. Nke a bụ n'ihi n'adịghị ụdaolu, omenala ngosi ada mkpa na-kwukwara aka ka ngosi ụda. Soro ndị a dị mfe iji ịtọ gị mp3 faịlụ dị ka a omenala ngosi ụda:
1. Download gị chọrọ mp3 faịlụ gị Samsung mobile ekwentị ma ọ bụ nyefee ya na ekwentị mkpanaaka gị iji a laptọọpụ mmasị na ya site na eriri USB.
2. Download a Njikwa faili gị Samsung mobile ọ bụrụ na ị adịghị ugbua nwere otu onye na ẹkedori ya.
3. Chọta nke chọrọ mp3 faịlụ na ị chọrọ ka dị ka gị omenala ngosi ụda ma detuo ya ka Ịma Ọkwa ndekọ n'ime ekwentị esịtidem nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ ndị Ịma Ọkwa ndekọ, aka ike ya n'ihu na-edegharị ihe mp3 faịlụ n'ime ya.
4. Gaa Settings Sound Ngwaọrụ Ịma Ọkwa na họrọ mp3 faịlụ na ị dị nnọọ kwukwara na ndekọ ka ya dị ka gị omenala ngosi ụda.
Echefuola ọkacha mmasị gị Samsung ringtone accidently? Ma ọ bụ nanị na ọnọdụ na-ringtone si ọhụrụ Samsung na ekwentị mkpanaaka gị okenye Samsung ekwentị? Ị nwere ike mfe eso njikọ nyere n'okpuru na-agagharị si ọtụtụ narị ukara Samsung ụdaolu. Ị nwere ike ibudata dị ka ọtụtụ ụdaolu dị ka ị na-amasị gị na Samsung ekwentị n'efu site na ndị a weebụsaịtị!
Ọ bụrụ na ị nwere ogologo mp3 track na ị chọrọ bee n'ime a nta mp3 track gụnyere nke ọkacha mmasị gị akụkụ si dum track naanị, ị na-adịghị mkpa gakwuru elu-ọgwụgwụ music edezi software. Wondershare Video Converter Ultimate, Bụ onye click ngwọta gị niile music ọnwụ nsogbu. Ọ dị mfe iji n'ihi na ma novice na elu ọrụ na awade a hassle free ọzọ ka omenala music edezi software. Nkwado maka ihe karịrị 150 media formats na ikike na-agba ọsọ na ma Windows na Mac ịwa usoro, Wondershare Video Converter Ultimate-akwụ ụgwọ naanị $39.95 / Year ma ọ bụ $49.95 bụrụ na ị họrọ nweta onwe gị a ndụ na ndenye aha. Ọ nwere ike ibudata site ebe a.
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị iji kwụọ ụgwọ maka music na a oge nke dijitalụ elu ebe nnọọ ihe ọ bụla dị online for free. N'agbanyeghị nke ahụ, weebụsaịtị na keukwu music collections na-emeghe ka onwe nbudata site niile ọrụ dị ụkọ. E nwere nnukwu aha dị ka Pandora, Spotify na SounCloud ma ndị a na-enuba ọrụ na-achọ ihe ịrịba ama-ins na adịghị ekwe ka ọrụ ibudata music ha ngwaọrụ na free ndebanye aha. Iji mee ka ihe dịkwuoro gị mfe, anyị gụnyere abụọ nke kasị mma weebụsaịtị maka nbudata free music gị mobile, laptọọpụ, desktọọpụ wdg ke ibuotikọ emi. Na-agụ na ịmatakwu banyere ndị a ukwuu weebụsaịtị.
Jamendo bụ a free music egwu na-akpọ na nbudata na website na a nnukwu, nọgidere na-enwe music collection si n'akụkụ nile nke ụwa. Ọ nwere nile di iche iche nke music tracks si Jazz ka hip iwuli elu ka Bad. Ọrụ nwere ike ọbụna bulite songs si ha onwe ha collection ka website N'ihi ya music nchekwa data anọgide emelitere mgbe niile site ọtụtụ nde Jamedo ọrụ gburugburu ụwa.
Ọ nwere ike ibudata site ebe a.
Soundowl, dị ka Jamedo, bụ eze free music website na-enye ohere ọrụ na-ege ntị na ibudata songs nke ha nhọrọ ka ha ngwaọrụ n'oge ọ bụla. Soundowl nwekwara nwere otu nnukwu music nchekwa data kpụrụ nke music niile Genres. Soundowl na-enye ohere ọrụ bulite tracks ha collection ka website dị ka Jamendo.
Ọ nwere ike ibudata site ebe a
Samsung Kies Ọkwọ ụgbọala, ebe Download ya
> Resource> Samsung> 4 Atụmatụ-amarakwa banyere Samsung Ringtone MP3